zempilo yabantu zizohlala kwasekuqaleni. Namuhla, abaningi benomuzwa wokuthi ayeba imithi Sekuyisikhathi eside waphila isikhathi eside ukudlula yayo. Iziguli ezinjalo uthanda ukuya ezibhedlela ezizimele. Ayikho ngaphandle lingumuzi Obninsk. nokuvuselelwa isikhungo, okuyinto yasungulwa engaphezu kweminyaka engamashumi amabili edlule, sinikeza kunakekelwa ngetemphilo letisezingeni lelifanele nakanjani esobala. Zonke iminikelo zenziwa nge-Cashier, kanye nezifundiswa uthole umvuzo ohloniphekile omkhulu ngomshikashika wabo.
Ngasekuqaleni kwawo-90-yalolucwaningo ekhanda odokotela ababili kwadingeka umbono ukudala e Obninsk, iklinikhi lokuqala, okungase ku imali ngesisekelo ukukhonza iziguli. Akukho kungabaza zenkohlakalo ngempela. Zonke lezi ziguli uyazi kahle kangakanani ukuze ukhokhele inqubo ethile. isikhungo sokwelapha, ngokuthi "nokuvuselelwa isikhungo" usebenza ngempumelelo kuze kube namuhla. Zonke lezi ziguli unekhono ngokwethembeka akhokhe udokotela wakho ukuze bayothola ukwelashwa.
Rehabilitation Center (Obninsk) wathola ukusekela neziphathimandla zendawo. It yathengwa yonke imishini ezidingekayo luhlolo nokwelashwa kweziguli ugula ubangwa nezibi. Ngenxa UNikolai Eliseev futhi Zinovy Gurov (abasunguli umtholampilo) wakwazi ukusindisa ukuphila ezingaphezu kweyodwa.
Ochwepheshe isikhungo sezokwelapha
Abasunguli be-zokungcebeleka - ongoti oseneminyaka engu-. Eliseev Nikolay Petrovich kuyinto ozobhapathizwa Medical Sciences. Lokhu Udokotela Weqolo ezingeni eliphezulu, owazi wonke mayelana izifo yomgogodla. UNikolai Petrovich ophethe isikhundla sokuba a isikhungo sezokwelapha. Umqondisi Gurov kuyinto Zinovy Rudopyanovich (Ph.D. e Economics). Udokotela induna umtholampilo kuyinto Plakhuta Dmitry Aleksevich - isazi sezifo zezingane nge engamashumi amabili nakho.
Lesi sikhungo yezokwelapha iqashe ngodokotela abaqeqeshiwe onganikeza ukunakekelwa izinga kunoma yimuphi umkhakha wezokwelapha. Kuyinto akukho ngozi izakhamuzi nezinye izifunda bavame ukuza ngoba impatho ungaphakathi Obninsk. Rehabilitation Center inikeza ithuba elanele ekwelapheni isibindi eziyinkimbinkimbi, izinso, isimiso sezinzwa esiyinhloko, zokuphefumula. Ochwepheshe Excellent abasebenza emkhakheni wokubelethisa nezifo Pediatrics. ukufinyelela esifike udokotela - ukhiye eyinhloko yokwelashwa okuphumelelayo.
Esikhathini umtholampilo, wonke umuntu ithuba ahlolwe ngokugcwele wezokwelapha. Ukuze wenze lokhu, kufanele ulethe imibhalo efana iphasipoti, kamazisi yasebusosheni (uma ikhona), isitifiketi ezidlulayo fluorography. Abesifazane ngaphezu kwalokho kufanele akhiphe isitifiketi esiqinisekisa ukudlula wezifo zabesifazane e ezinyangeni eziyisithupha ezedlule. Usizo kusukela Ukuhlukumeza Into futhi Umtholampilo wokwelapha abagula ngengqondo ayidingekile.
behlolwa ephelele kuhilela odlulayo abantu abafundile njengabameli ukuthi owelapha, udokotela wezinzwa, wenhliziyo, ophthalmologist, wesikhumba, endocrinology, isazi sezifo zengqondo kanye wezifo zengqondo. Abesifazane kuyodingeka ibhekane i wezifo zabesifazane ezengeziwe. Ukwamukela yezokwelapha usizo abashayeli ukuba ukuhlolwa kwegazi okwengeziwe, umchamo kanye kuso. Ngo abesifazane ukuthatha smear ukuze uhlole microflora lwesitho sangasese sowesifazane. Uma kudingekile, kungashiwo electrocardiogram kunikezelwe. Uma imiphumela yocwaningo ayatholakala kwezinye izikhungo zokwelapha, ukuvuselelwa isikhungo (Obninsk), amanani amasevisi is kakhulu ziyancipha. Izindleko msebenzi emalini jikelele uhla lwamanani.
Ukwamukelwa uqhutshwa ngesivumelwano. odokotela abafanelekayo Rehabilitation Center (Obninsk) zikulungele ukwamukela iziguli hhayi kuphela emzini wabo, kodwa futhi kusukela nezinye izifunda of Russia. Asebenza ukuhlolwa gynecologists ukuncoma imali sezinsuku ezingu-6-7 umjikelezo wokuya esikhathini. Ngokusho kobufakazi angaqokwa njengomhloli kokuxilongwa ezengeziwe. Ngo izilungiselelo emitholampilo labetibambile ultrasound intravaginal ukuhlola, okuyinto ikuvumela ukuxilonga ngokunembile isiguli.
Esikhathini kulungiselelwa bezempilo kungaba kwenziwe ukuhlinzwa. Uma kuba khona isidingo ukwenza hysteroscopy, isiguli kufanele silandele iseluleko eziyisisekelo udokotela. Yidla ukudla kungaba amahora amathathu nje ngaphambi inqubo ehleliwe. Ngemva hysteroscopy libonisa ezinye ngokobulili amasonto amabili. Qiniseka ukuthatha enqunyiwe imithi udokotela wezifo zabesifazane. Nse Imiphumela hysteroscopic cwaningo ingatholakala izinsuku eziyisikhombisa.
Omunye amagatsha ebaluleke kakhulu imithi okhuluma yezifo yisimiso senhliziyo nemithambo yegazi. Famous for nangodokotela bababhekene nezifo zenhliziyo afanelekayo Obninsk. Rehabilitation Center uyakujabulela ukunikeza kokubonisana kanye nokwelashwa ongoti ezifana Spirov Aleksandr Pavlovich, Petuhova Yuliya Aleksandrovna, Podanaeva uValentina Belyakova ULyudmila Mihaylovna. Ngenxa yalaba odokotela bakwazi ukusindisa izimpilo eziningi. ukunakwa okuningi ikhokhelwa emtholampilo nezenhliziyo ezingane. Ngokusebenzisa eliphezulu imishini kwezokwelapha ayikwazanga ukuhlola isifo senhliziyo zisencane.
Esikhathini umongo Rehabilitation Center isimiso esikhethekile elikuvumela ukuba nokujikeleza kwegazi nokugeleza kwegazi eliya myocardium lakhiwe. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi iziguli esigabeni sokuqala lesi sifo. Ochwepheshe ufuna indlela ngamunye isiguli ngasinye. Lena akuyona okuwukuphela kwendlela yokwelapha ngemithi yokwelapha, kodwa futhi umzimba ezikhethekile, kanye Physiotherapy. Iziguli ziyakwazi ukuqhubeka zithole ukwelashwa esibhedlela.
izifo eziningi isimiso sezinzwa esiyinhloko ayikwazanga ukuxilonga kuphela uma isifo iye yathuthuka ngokushesha. Lapho ikhanda njalo ukulala neziyaluyalu, ukukhathala, ochwepheshe batusa ukubhekana ukuze kuboniswane ku Rehabilitation Center (Obninsk). Amanani ukuze ihlolwe eziyinhloko azizona ngempela yeningi. ukunakekelwa ngezokwelashwa Timely - isihluthulelo sempumelelo.
Izibuyekezo eminingi emihle kungenziwa wezwa Nadezhkinu Natalyu Ivanovnu. Lokhu dokotela zalezo ziqu eliphakeme abanolwazi neminyaka engaphezu kwengu-nanhlanu. Ingxenye esigcwele onguchwepheshe kuyinto iphini udokotela omkhulu lwasemtholampilo uchwepheshe ingxenye. Natalia wakwazi ukuthuthukisa indlela yakhe siqu kokuvuselelwa iziguli emva ezinzima kuhlasimulise okulimala ebuchosheni unhlangothi. Doctor futhi isebenza nge seziguli ezisencane.
Mayelana ekusungulweni kobuchwepheshe bokuthuthukisa ikhompyutha, kanye nokuwohloka kwemvelo, iziguli eziningi beze sezempilo ukukhononda umbono. Uma izimo ezifana ezikude, abone izinto eziseduze noma ale nkinga, ngaphambi ikakhulu libhekisela asebekhulile, iziguli namuhla Udokotela wezifo zamehlo zonke kunamathuba amaningi okuthi izingane. amathuba amahle kakhulu ekwelapheni izifo esweni ihlinzeka Rehabilitation Center (Obninsk). Izibuyekezo abonisa ukuthi ukufinyelela esifike Uchwepheshe ivumela cishe ukubuyisela ngokuphelele umbono.
Belyakova Galina Petrovna - a ophthalmologist abaqeqeshiwe kanye umsebenzi esimnandi. Kusukela ngo-1998, ungcweti wakwazi ukubuyisela obona kahle ukuba iziguli eziningi. Izibuyekezo Good ungezwakala futhi mayelana Petuhova Aleksandra Ivanovicha. Ngena kokubonisana ochwepheshe aphumelele ngesivumelwano reception.
Mhlawumbe omunye uphethwe kakhulu esisabekayo ka "umdlavuza". Ingabe ukwazi ukukunqoba noma cha, amaphesenti angu-90 kuncike izinga isiguli. Isihluthulelo sempumelelo - ukufinyelela esifike onguchwepheshe. Induna Rehabilitation Center oncologist kuthatha Lozebny UNikolai Ivanovich. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-eziyishumi yimpumelelo, wakwazi ukuba siphinde sithole ukholo ngokwabo ngoba iziguli eziningi. Ochwepheshe bathi kuxhomeke kakhulu esimweni sengqondo sawo wonke umzimba wesiguli. Iningi leziguli eziza ngempela ukuphila, ukulwa kanye ukunqoba.
Bekanye oncologists elulama izikhungo umsebenzi nezazi zokusebenza kwengqondo. Into esemqoka - ukuze akholise isiguli ukuthi ukuphila akumvimbi. Ethola isabelo kwemithi kanye nesimo sengqondo esifanele ukunikeza umphumela omuhle emavikini ekucala yokwelapha.
Izifo eziningi abahlangene isikhundla ayilungile sokukhubazeka komgogodla. umsebenzi Ukungawuvivinyi umzimba, indlela yekuma okubi kuholela Ukuhlanekezelwa. Ngenxa yalokho, iziguli ziba ukhwaliti ubuhlungu emuva, akwazi ukugcina herniated, ukugobeka komhlandla, nokunye. Izinkinga D. Indlela oma dengwane noma kunjalo engenakwenzeka. Warping kungaba kamuva kuholele ukufuduka yezitho zangaphakathi, abampofu igazi ebuchosheni nezinye izinkinga ezinkulu.
Kulabo abafuna ukuxazulula izinkinga yomgogodla, kufanele nakanjani ukuza Obninsk. Rehabilitation Center inikeza amasevisi tisebenti leticeceshiwe letinemakhono kakhulu, efana Eliseev Nikolay Petrovich, Petuhov Matvey Aleksandrovich, Tatsyak Aleksey Vladimirovich. Esikhathini umtholampilo isiguli ngeke ahlolwe ngokuphelele ngokomzimba futhi inkambo yokwelapha massage. Uma kunesidingo, ukuphathwa ungentiwa esibhedlela.
Abazali abanezingane ezincane Ungaphinda uvakashele Rehabilitation Center (Obninsk). Ochwepheshe ukusungulwa wezokwelapha uyazi indlela ezingezwakali iziguli. Isebenzisa ngodokotela abaqeqeshiwe oseneminyaka engu-. Iningi wokubuyekezwa okuvumelekile ungezwa mayelana ochwepheshe ezilandelayo: Kozlovu Lyubov Vladimirovnu, Baranovu Natalyu Vasilevnu, Nezhdanovu Marinu Viktorovnu. Ukubona udokotela seziguli ezisencane uzokwazi ukubona eziningi amathoyizi nemaphosta ezimibalabala. Lokhu kubangela isimo ekhethekile friendly evumela ingane yakho ukuba uphumule futhi ukusiza uchwepheshe ukuqhuba ucwaningo.
Abazali nezingane ezincane kufanele ibhalise kusengaphambili ngesikhathi Rehabilitation Center (Obninsk). Ucingo ebhukwini ezikhungweni zezempilo: 8-484-39-432-10. Izingcingo avumelekile kusukela 7,00 kuya 21,00.
Ukusungulwa yezokwelapha inikeza ngamasevisi imali ngesisekelo. Amanani ngempela yeningi. Ngakho-ke, ukwelashwa eliphezulu angakwazi ukukhokhela cishe njalo nesineke. Ngesikhathi yokubonisana sokuqala nganoma yisiphi Uchwepheshe kuyodingeka bakhokhe ruble 1,200 kuphela. Kulabo abafuna ukuba ahlolwe ngokugcwele yezokwelapha, kuyodingeka bakhokhe ngokheshi ruble 3,000. Izindleko izinqubo eyodwa sokuvivinya umzimba kuyoba ruble 150.
Labo abafuna ukuthola ukwelashwa izinga behola imali encane, kuwufanele uvakashele Rehabilitation Center (Obninsk). Ucingo Registry abalwe ngenhla. Ukuze izigaba elibusisekile izakhamuzi owethulwa izaphulelo ezikhethekile. Iziguli kusukela imindeni emikhulu, amaqembu ekhubazekile lokuqala nelesibili, yiMpi Enkulu Yobuzwe, abahlanganyeli ngeke ikhokhele izindleko ngaphansi ngamaphesenti angu-15.
Indlela ukuze bafinyelele ezindaweni zosizo lwezempilo?
Ukuze afundise ukwelashwa eliphezulu, iziguli eziningi ezivela kwamanye amadolobha ufuna ukuza Obninsk. Rehabilitation Center (lokubhalisa kanye nochwepheshe ukhiye) usebenza izinsuku eziyisikhombisa ngesonto. Ingabe umuntu ocabanga ukuthi isikhungo sokwelapha e-mgwaqo ubani House 2. Kusukela esiteshini sesitimela emtholampilo engafinyelelwa ngenombolo ibhasi 2, 9, 15, 21, 23 (ayeke "shopping centre"). Ulwazi mayelana operation umtholampilo ngamaholide, kuyinto efiselekayo ucacise kusengaphambili. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma kunesidingo ukuze uthole aphoyintimenti kudokotela onguchwepheshe ethile.
Izibuyekezo ze-Rehabilitation Center ku Obninsk
Eminyakeni engaphezu kwengu-amabili nakho ezindongeni emtholampilo wavakashelwa lenqwaba iziguli. Iningi lazo ushiye okubuyayo mayelana "Rehabilitation Center, LLC." Obninsk abaningi abawazi ngenxa kulesi sikhungo. Iziguli eziningi bazimisele ukukhokhela ukuze uthole iseluleko professional kusuka nesikhathi esimnandi.
Kwamjabulisa amanani ezingabizi. Inani ruble 3000 nethuba ahlolwe ngokugcwele wezokwelapha hhayi bame emigqeni. Reception izazi uqhutshwa ngesivumelwano. Umuntu kumelwe amane ukuya maphakathi nokuvuselelwa ukuba ngesikhathi esithile futhi alethe kanye amaphepha adingekayo.
Test isampula Shuvarskogo. inqubo Uhlolojikelele
Umzimba Simple and ngempumelelo ngenxa Ehlala emgogodleni
Elisophahleni Cosy ngezandla zakhe
U-Love Orlova: ifilimu ne-biography